पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै संरचना फेर्नुपर्नेछ– गोविन्द पोखरेल | Samaj Khabar
on: के–के गर्दै छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ?
पहिले यहाँ २ साता काम गरें । अहिले कार्यकारी अधिकृत भएको पनि धेरै भएको छैन । यसमा जनताको बुझाइ पनि कम भएको छ । घर सरकारले होइन, जनता आफैंले बनाउने हो । सरकारले दिने भनेको पैसा पो हो । प्राधिकरणको काम भनेको सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम, अनुदान, जनतालाई दिने सहुलियत जति सक्दो चाँडो जनताका माझमा पुर्‍याउने हो । प्राधिकरण एक्लै नभई सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, रक्षा, स्वास्थ्यलगायत सँग मिलेर पुर्‍याउने हो । यसका लागि प्राधिकरण लागिरहेको छ । प्राधिकरणले केही काम क्रमागत नगर्दा धेरै ढिलो भएको छ । यसबीच जति पनि मापदण्ड र कार्यविधि बनाइए त्यसले अलिकति झन्झटिलो प्रक्रिया पनि बनाएको छ । सर्वसाधारणलाई काठमाडौंमा प्रयोग गर्नेजस्तो मापदण्ड बनाइएकाले केही झन्झटिलो देखिएको हो । यसले केही अप्ठ्यारो भए पनि म आइसकेपछि केही सुधारको प्रयास भएको छ । अहिले मापदण्ड पुनरावलोकनको तयारीमा छौं ।
संसदीय समितिको बैठकमा प्राधिकरण विघटन गर्ने भन्नुभएछ है ?
प्राधिकरणको संरचना बनाइएको छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ । जस्तो प्राधिकरण पुनर्निर्माण कोष भनिएको छ, त्यो गठन गर्नुपर्छ । विपत् व्यवस्थापन पुनर्निर्माण भनेको पहिल्यै सोचेर गर्ने कुरा होइन । उदाहरणका लागि हामीले पहिलो किस्ताबापतको रकम दियौं मान्छेले घर बनाए, तर ती घर मापदण्डअनुसार पुगेनन् । ती नपुगेका घरहरुलाई मापदण्ड पुर्‍याउने गरी काम गर्न नयाँ उपाय निकाल्नुपर्ने भएको छ । जुन पहिला सोचिएको थिएन । त्यसका लागि त थप आर्थिक बोझ पर्ने भयो । बोझका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई गाली मात्रै गरेर पनि भएन । प्लान गरेको बजेट अनुसारै मन्त्रालय चल्छ ।
तपाईं प्राधिकरणमा आएपछि भएका काम के–के हुन् ?
म आएपछि गुनासोलाई विकेन्द्रीकरण गरेको छु । दुर्गमका मान्छेको घर भत्किएको काठमाडौंमा बसेर हेर्न सकिने अवस्था छैन । त्यो प्रजिअमार्फत सम्बोधन हुने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लामा पनि कार्यालय छन् । त्यसैले जनताले गुनासो गर्न काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । पहिला सम्झौता भएर पनि पैसा पाएनन् भन्थे । म आउनेबित्तिकै दोस्रो र तेस्रो किस्ताका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ जिल्लामा पठाउने काम गरें । त्यो अहिले जिल्लामा थुप्रिएको छ जनताले निवेदन दिनेबित्तिकै पाऊन् भन्ने उद्देश्य हो । अर्को काम जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न चाहनेलाई थप २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गराएर मन्त्रिपरिषद् पठाएका छौं, त्यो निर्णय भएपछि लागू हुन्छ । त्यस्तै ३ लाखले घर बनाउनै पुग्दैन भनेकाले भर्खरै हामीले कम लागतमा बन्ने ६ घरका नक्सा पनि सार्वजनिक गरेका छौं । मापदण्डकै कारण दोस्रो किस्ताको रकम रोकिएका बेला मापदण्ड परिमार्जन गरी पठाउँदै छौं । गाउँ–गाउँमा इन्जिनियरको समस्या रहेका बेला ५ जिल्लामा हजार विद्यार्थी पठाएर हरेक घर यसरी बनाउनुस् र दोस्रो किस्ताको रकम लिन जानुस् भन्यौं । अब ती विद्यार्थी फर्केर आउने बेला भएको छ । नेपाली सेनाको जनशक्ति लिएर ३ जिल्लामा २७ विद्यालय बनाइएको छ ।
अस्थायी शिविरबाट कति परिवार स्थानान्तरण भइसके ?
अहिलेसम्म जम्मा ८७ जनाले मात्रै पुरै घरको अनुदान लिनुभएको छ । अरुको घरको मापदण्ड पुगेको छैन । त्यसैले मापदण्डअनुसार पुर् याउन सुधार गर्न दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब त्यस्ता घरमा कम्तीमा २० देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने हो भने मापदण्डअनुसारको पुग्छ । उहाँहरुले ३ लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ । मैले आरोप लगाउन त खोजेको होइन तर सर्भे गर्ने बेलै तालिम दिइएको भए अहिले यो मापदण्डको समस्या आउने थिएन । हामीलाई त्यतिबेला ६० हजार जनशक्ति आवश्यक परेको थियो भने जम्मा २० हजार जतिले मात्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले पनि सर्भे गर्दा समस्या भएको हो ।
अब एकीकृत बस्तीको सम्भावना छ कि सकियो ?
अब एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अघि बढाउन सकिँदैन । किन भने पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार वितरण भइसकेको छ । धेरै ठाउँमा जग पनि राखिसके । त्यो मौका त हामीले गुमाएकै हौं । तर, अहिले पनि हामीले एकीकृत बस्तीका लागि आह्वान पनि गरेका छौं । विभिन्न जिल्लाबाट एकीकृत बस्ती बनाउँछौं भन्दै आउने पनि छन् । एकीकृत बस्तीका लागि हामीले सामाजिक पूर्वाधारका लागि सुविधा दिनुपर्छ । जस्तो बाटो, पानी बत्तीको सुविधा हामीले पुर्‍याउनुपर्छ । जनता जागरुक बनेर आउनुभयो भने त्यसलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौं । यसका लागि सरकारका सबै निकायसँग समन्वय गर्न सम्भव छ ।
टोटल राष्ट्रिय मासिकबाट
(Visited5times, 1 visits today) Share